Ampidino Zoom ho an'ny Windows
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (15.00 MB)
Zoom dia rindranasa Windows izay ahafahanao miditra aminny resadresaka aminny video aminny fomba tsotra, izay matetika ampiasaina mandritra ny fampianarana lavitra ary misy fiasa ilaina ary manolotra fanohanana aminny fiteny Tiorka.
Ahoana ny fomba hanaovana antso an-tsary Zoom?
Aorianny fisintomana ny rindranasa Zoom dia miditra aminny tsindrio indroa aminny programa izahay. Ao aminny efijery izay miseho, dia miditra aminny solonanarana sy tenimiafinay izahay, raha misy izany. Raha tsy izany dia mamorona mpampiasa izahay.
Aorianny fidirana an-tsokosoko dia tsindrio ny fivoriana vaovao misy ny Orange Camera Sign eo aminny efijery izay miseho. Aminny fipihana eto, misy safidy vitsivitsy hiseho etsy ambany. Eto isika dia manomboka ny resaka video aminny alàlanny fanindriana ny safidy Start with video.
Misy bokotra Manasa eo aminny farany ambany aminny efijery izay ahitantsika ny tenantsika. Aorianny fipihana ity bokotra ity dia miseho ny safidinao fizarana efitrano. Raha te hizara ny rohy aminny alàlanny mailaka ianao dia tsindrio eo afovoanny efijery ny bokotra. Raha te handefa adiresy mivantana isika dia mahazo ny adiresy takiana aminny alàlanny fanindriana ny safidinny fandikana URL eo ambaninny efijery.
Avy eo alefanay any aminilay olona handray anjara aminilay resaka izany adiresy izany ary atombotsika ny resaka.
Ahoana no hidiranao aminny chat video Zoom?
Tsotra kely ny fandraisana anjara aminny resadresaka an-tsary nosokafana taminny fandaharana Zoom. Voalohany indrindra, tsy maintsy manana ny adiresy rohy ao aminny efitrano ianao. Ilay olona manokatra ny efitrano dia mila mandefa adiresy rohy aminao.
Avy eo ianao dia afaka manatevin-daharana ilay resaka aminny alàlanny hoe Miaraha Mivory. Raha voahodina ny efitrano, dia tsy maintsy ampidirinao ny teny miafina aorianny fanindriana ny bokotra Miaraha mivory.
Ny programa fiantsoana horonantsary Zoom, izay azonao ampiasaina maimaim-poana, dia manome antsipiriany maro. Azonao atao ny manamarina ny tombony azo aminny mpikambana ao aminny zom-pirinty eto aminity tranonkala ity.
Haben'ny rakitra: 15.00 MB
Fanavaozana farany: 29-06-2021
Trillian, iray aminireo rindrambaiko feno indrindra ahafahanao mitantana serivisy fandefasana...
TeamSpeak 3 dia programa izay tena malaza indrindra eo aminireo mpilalao ary mamela antsika hanana...
Inona no atao hoe Skype, aloa ve izany? Skype dia iray aminireo fampiharana aminny chat sy...
WhatsApp dia fampiharana fandefasan-kafatra maimaimpoana mora apetraka izay azonao ampiasaina...
Facebook Messenger for Windows, ny programa fandefasan-kafatra nomaninny Facebook, dia natolotra ho...